ခရစ် Fetner, မာကု Aitken နှင့် Darcy Antonellis SMPTE 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲမှာ Keynote မှ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ခရစ် Fetner, မာကု Aitken နှင့် Darcy Antonellis SMPTE 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲမှာ Keynote မှ
ခရစ် Fetner, မာကု Aitken နှင့် Darcy Antonellis SMPTE 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲမှာ Keynote မှ
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနခေါင်းဆောင်များမှာ Insights နှင့်ကြှမျး Share မူမည် SMPTE 2014 ညီလာခံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနေ့လယ်စာစားပွဲစဉ်အတွင်းနှင့် SMPTE အပေါင်းအဘော်တို့နေ့လယ်စာစားပွဲ
White Plains, နယူးယော့ - သြဂုတ်လ 19, 2014 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (R) (SMPTE(R)), ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ယနေ့များအတွက်သုံးပြောရမှာပီထင်ရှား SMPTE 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ (SMPTE 2014), အ Loews မှာအောက်တိုဘာ 21-23 ဟောလိဝုဒ် အတွက်ဟိုတယ် ဟောလိဝုဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယား.
ခရစ် Fetner, Netflix မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမိတ်ဖက်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဖွင့်လှစ်ပြောရမှာကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်သောကာလ၌, အများအတွက် ticketholders SMPTE စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနေ့လယ်စာစားပွဲ, Mark Aitken, Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုမှာခေတ်မီနည်းပညာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးပြောရမှာတင်ဆက်မှုကိုနားထောငျဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်, Vubiquity CEO ဖြစ်သူ Darcy Antonellis ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် SMPTE မှာအသစ် 2014 အဘို့အထဲမဝငျသူများအပါအဝင်အပေါင်းအဘော်တို့, SMPTE အပေါင်းအဘော်တို့နေ့လယ်စာစားပွဲ။
"ခရစ်, မာကု, နှင့် Darcy အားဖြင့်တင်ပြအဆိုပါအဓိက shared ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံကနေတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်လာမယ့်ခိုင်မာတဲ့ညီလာခံအစီအစဉ်တွင် punctuate လိမ့်မယ်" ဟု Wendy Aylsworth ဆိုသည်ကား, SMPTE သမ္မတနှင့် Warner Bros. နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးမှာနည်းပညာ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။ "အဆင့်မြင့်မီဒီယာပေးပို့နည်းပညာများပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများတွင်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအတွေ့အကြုံများများ၏မတူကွဲပြားခင်းကျင်းဖြည့်စွတ်ကြွယ်ဝစေရန်နှစ်ဦးစလုံးအားဝတျပွုပါမညျ SMPTE 2014 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများ။ "
Fetner တစ်ဦး SMPTE အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတစ်ဦးပြည်သူ့အသံလွှင့်စနစ်များ (PBS) Affiliate မှာစစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်, နှင့်ဆုရပြပွဲအပါအဝင်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များအတွက်တစ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အစေခံရန်သွား "ဆေးပညာ Frontiers ။ " သူကနောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင် Discovery ဆက်သွယ်ရေးမှာ postproduction နှင့်စစ်ဆင်ရေးအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်တစ်ခု All-ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာမှကုမ္ပဏီ၏ရွှေ့ပြောင်းလမ်းညွှန်နှင့်ဗြိတိသျှအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (ဘီဘီစီ) မှာ postproduction နှင့်နည်းပညာန်ဆောင်မှုများ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက New York မှာသူအားလုံးနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ဘယ်မှာ အီလက်ထရောနစ်ရောင်း-မှတဆင့် (EST), ဗီဒီယို-On-demand (VOD) နှင့်ကြေးပေးသွင်းဗီဒီယို On-demand (SVOD) ဖောက်သည် cable ကိုကွန်ယက်ကိုဘီဘီစီအမေရိကားနှင့်၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးနှစ်ဦးစလုံးထောက်ပံ့။ Netflix ဟာမှာသူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသူရိုးရိုးနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ Netflix နဲ့မှအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုကိရိယာများ, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အသိပညာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့။
စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် Sinclair အသံလွှင့်အကျိုးစီးပွားကိုယ်စားပြုအပြင်, Aitken ကို Advanced ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်ကော်မတီ (ATSC) TSG / S4 codec အလုပ်လုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်မိုဘိုင်း 500 မဟာမိတ်အဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသည်နှစ်ဦးစလုံး၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဥက္ကဌဖြစ်ပြီးလူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအသင်း (NAB ) တီဗီနည်းပညာကော်မတီ၏။ 1987 ကတည်းကသူလည်းအဆင့်မြင့်ရုပ်မြင်သံကြားန်ဆောင်မှုများအပေါ်ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မတီ (FCC သည်) အကြံပေးကော်မတီထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ Sinclair ဝင်ရောက်မတိုင်မီက Aitken သူဈေးမှအရာများ၏အင်တာနက်ကိုဆောင်ခဲ့သောသူဟာ Emmy (R) ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရတဲ့အသင်းကို (IoT) နည်းပညာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိရာ Comark ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောရာထူးကျင်းပခဲ့တယ်။ သူသည်လက်ရှိတွင်ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများသည်ကို IEEE ၏အသင်းမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, SMPTE။ သူကဆန်းသစ်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအပေါ်မြောက်မြားစွာစာတမ်းများ (RF) ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, အဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံစနစ်ကဒီဇိုင်း, နှင့်ဆက်စပ်အကောင်အထည်ဖော်မှုမဟာဗျူဟာများရေးသားများနှင့်အမျိုးမျိုးသော RF device များအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Aitken အဆိုပါ 2008 အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Cable ကိုနည်းပညာခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုနှင့် 2013 ATSC ဘားဂျေ Lechner ထူးချွန် Contributor Award ဆုတစ်ဦးလက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
မတိုင်မီက Vubiquity မှာစီအီးအိုဖြစ်လာဖို့, Antonellis သူမကနည်းပညာမဟာဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုမောင်းဖို့မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေး-related ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုတီထွင်မှုများ၏ကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုမှုကိုညွှန်ကြားဘယ်မှာ Warner Bros. Entertainment က Inc ကိုမှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CTO အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကဖြစ်သော CBS မှာသူမ၏သက်တမ်းကာလအတွင်းသူမကကွန်ယက်ရဲ့နယူးယောက်နှင့်ဝါရှင်တန်ဒီစီ, စစ်ဆင်ရေးများအတွက်တာဝန်နှင့်အတူဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍကျင်းပခဲ့တယ်။ Antonellis နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်သုံးခုအချိန်သူဟာ Emmy Award ဆု-ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်မြောက်မြားစွာအကြံပေးအဖွဲ့ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ "အမျိုးသမီးများနေ့ Elite" နှင့်အဆိုပါရက်နေ့တွင်အမည်ရှိထားပြီး ဟောလိဝုဒ် သတင်းထောက်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပါဝါ 50 စာရင်း။ သူမလည်းအသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Cable ကိုရဲ့နည်းပညာခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ NASSCOM တီထွင်ခေါင်းဆောင်ဆုကိုရရှိထားပြီးပါပြီ, နှင့်နည်းပညာခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုအတွက်နှစ်စင်း NAB TVNewsCheck အမျိုးသမီးများနှင့်အတူတင်ဆက်ခဲ့သည်။ Antonellis တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် SMPTE သူချင်း။
ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ - - ကမ္ဘာအနှံ့ကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူ Society ကထက်ပိုမို 6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထောကျနေသည်။ ယင်းနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိတ်ဖက်မှတဆင့် ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (R) (HPA (R)), ဒီအဖွဲ့ဝင်, ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, ကိရိယာများနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများကိုအဘယ်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းကပြည့်စုံစေသည် နှင့်အခြားပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE မှာရရှိနိုင် www.smpte.org/join.
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ IBC2014 SMPTE Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က	2014-08-22
ယခင်: Wohler ဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေခံပြီးကုန်ပစ္စည်းမိသားစု Include မှဘရာဇီးရဲ့ CIS Group မှအတူ Reseller သဘောတူညီချက်တိုးချဲ့
နောက်တစ်ခု: Arqiva ဗြိတိန်မြေပြင်အခြေစိုက်အသံလွှင့်ကွန်ယက်၏ဗိုလ်မှူး Upgrade ဘို့သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe EM4000 ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာရွေးချယ်